Hafiriana no tokony handalo ny firaisana?
Hafiriana isika no afaka manao firaisana? Manaraka izany ve ny fotoana misy anao? Moa ve midika hoe "tsara" foana ny hoe "lava"? Nanontany tena ny maro hoe tokony ho ela ny firaisana. Ny fiheverana momba io olana io dia miova, miankina amin'ny traikefa, ny taona, ny toerana misy ny fiainana ary ny antsipiriany hafa. Firy ny olona, ​​ny hevitra maro, ary ny safidy maro momba ny faharetan'ny fiaraha-miasa. Androany isika dia handinika io lohahevitra io ary hiezaka ny hahafantarana hoe hafiriana no tokony handalo ny firaisana .
Longer - tsara kokoa?
Io fitsaratsaram-poana io dia miorim-paka amin'ny fahazazana, rehefa manomboka mihetsiketsika ny hormones. Mandritra io vanim-potoana io, ny iray amin'ireo "tombony" voalohany, raha jerena ny fampivoarana ny teknolojia fampahalalam-baovao, dia tonga amin'ny fijerena ny lahatsary maimaim-poana amin'ny votoatin-dresaka mipoitra. Ao amin'izy ireo, karazana herisetra, lahy sy vavy miaraka amin'ny endrika manamboninahitra tena manaitaitra ny firaisana ara-nofo, manolo ny fihetsika iray aorian'ny iray hafa. Mandritra ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra izany, mandritra ny fotoana tsy ahafahan'ny ramatoa mamoaka feo mitabataba, izay tokony hampiseho fa mahatsapa fahafinaretana tsy manam-paharoa izy. Tena marina ve izany?
Araka ny voalazan'ireo mpahay siansa izay nitarika fampianarana samihafa sy fanadihadiana momba ny mpivady mikasika ny "halavan'ny fotoana tokony hanaovana firaisana ara-nofo", ny fotoana isaky ny manao firaisana ara-nofo dia 7-11 minitra. Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra an'io fotoana io ho tsara indrindra, ny hankafy ny fifandraisana ary tsy ho reraka amin'ny fotoana iray ihany. Ny kely na lehibe mihoatra an'io elanelana io dia heverin'ny olona ho fohy sady lava loatra ny asa. Raha misy firaisana ara-nofo fohy toy izany, dia toy izany ihany koa ny zava-drehetra (raha tsy hoe firaisana ara-nofo ao amin'ny efitrano fatoriana na amin'ny tohatra), inona no atao hoe firaisana ara-nofo, hoy ny 15 minitra? Mety misy antony maromaro. Voalohany, tena mahagaga ara-batana izany. Faharoa, mahagaga ary tsy misy karazany. Na dia mandritra ny fotoana iray aza dia manova ny 2-3 ianao, izany no mamerina antsika amin'ny teboka rehetra momba ny fahatoranana ara-batana. Fahatelo, araka ny angon-drakitry ny fanadihadiana sy ny fandalinana, dia mihalava kokoa ny firaisana ara-nofo, arakaraka ny miseho ny fientanam-panahy ary miseho ny "plateau".
Ny fahatsapana no endri-tsoratra tsara indrindra
Ahoana àry no ahafantaranao ny fotoana ilanao izany? Tsotra ny toro-hevitra: mandao ny statistika rehetra tarehimarika, toro-hevitra ho an'ireo tia vehivavy za-draharaha sy fanaporofoan-kevitra momba ny lehilahy manam-pahaizana ary mifandray amin'ny fihetseham-ponao sy ny fihetseham-pon'ny mpiara-miasa aminao. Na oviana na oviana haharitra ny fahatanterahan'ny firaisana ara-nofo, dia zava-dehibe ny, mandra-pahatonga ny fotoana maharitra, mitaky ny havan-tiana ary mifanaraka amin'izy roa. Raha vao nanomboka ny fifandraisana aminao, aza matahotra ny hiresaka momba ny antsipiriany amin'ny namanao. Raha ny marina, ny resaka firaisana dia tsy ny fahafaham-po fotsiny ihany, fa ny fitiavana sy ny fikarakarana ny akaiky indrindra. Mizara ny fanirianao, ary, angamba, miaraka, ianao dia hianatra ny fomba ahafahanao manao firaisana mandritra ny alina nefa tsy manadino an'izany.
Ny firaisana ara-nofo amin'ny firaisana ara-nofo dia ny firaisana ara-nofo ary ahoana no ahafahana mianatra izany?
Ahoana ny fomba fanaovana firaisana amin'ny fiara?
Alika brown ao anaty akrôma
Draniki miaraka amin'ny holatra
Akanjo Rosia Fahiny
Ahoana no fomba anaovana tantely amin'ny dolara?
Fahatsiarovana romantika momba ny fihaonana voalohany teo amin'i Natalya Vodyanova sy Antoine Arnaud
Ny sakafo proteinina mandritra ny 10 andro
Takelaka fanafana ho an'ny fahavoazana
Nanapa-kevitra i Mariah Carey fa hamolavola hazo iray tsy misy an'i Brian Tanaka
Bolivia - fiaramanidina
Nahoana no nofinofin'ny seranam-piaramanidina
Firy ny karazan-tsakafo ao anaty strawberry?